यो जिन्दगीले के गर्यो? करोडबाट सिधै रोडमा, करोडमा पुगेको यात्रा क्षणभरमै बन्यो खरानी (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > यो जिन्दगीले के गर्यो? करोडबाट सिधै रोडमा, करोडमा पुगेको यात्रा क्षणभरमै बन्यो खरानी (भिडियो सहित)
यो जिन्दगीले के गर्यो? करोडबाट सिधै रोडमा, करोडमा पुगेको यात्रा क्षणभरमै बन्यो खरानी (भिडियो सहित)
admin November 8, 2019 भिडियो, समाज	0
जिन्दगी आफैमा रहस्यमय छ । कर्म देखि भाग्यसम्म भर पर्ने धेरै छन् तर कहिले काँहि न कर्मले साथ दिन्छ न भाग्यले । यस्तै भएको छ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तिमाल गाँऊपालिका अन्र्तगत पर्ने खहरे घाटको एक किराना पसलमा । जिन्दगीको करिब २५ बर्षको कडा परिश्रम र केही फेर्न लागेका भाग्यका किरणहरु क्षणभरमै आगोको धूँवासँगै उडिरहँदा सरस्वती भण्डारीको आँखामा अझै पनि आँशुको धारा बग्छ । ५० रुपैँयाबाट सुरु भएको उनको यात्राले भर्खरै करोडको कारोबार गर्दै थियो ।
हेर्नुहोस् यो भिडियोः
राजतन्त्र नफर्किएसम्म मुलुकमा शान्ति नआउने बताउँछिन माता सविता… भिडियोमै हेर्नुहाेस्
श्रीमतिको लागि ब्लड लिन हिँडेका वृद्धलाई सेनाले सडकमै नांगै बनाएपछि…